တိုက်ခိုက်မှု Utrecht ၏သတ်ဖြတ်မှုကြောင့် PSYOP မရပါဘူးဧကန်အမှန်အသကျသပွေ? မာတင် Vrijland
တိုက်ခိုက်မှု Utrecht ၏သတ်ဖြတ်မှုကြောင့် PSYOP မရပါဘူးဧကန်အမှန်အသကျသပွေ?
အတွက် Filed NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	မတ်လ 19 2019 အပေါ်	• 32 မှတ်ချက်
အရာအားလုံးကိုကျွန်တော်တစ်ဦးကောင်းစွာ-time PSYOP (စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆင်ရေး) နဲ့လုပ်ဖို့ကဒီမှာရှိပုံ, ဒါကြောင့်တနေ့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီသော်လည်း, အမှန်တကယ်သေဆုံးသူများ၏ဆွဲဆောင်မှုပုံပြင်များနေဆဲရှိပါတယ်။ အဘယ်အရာကိုသင်မြင်နှင့်ထိုပုံပြင်များကိုနားထောငျ? တိကျစွာ: မီဒီယာ၌တည်၏။ တဖန်သင်တို့ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တွင်တွေ့မြင်သင်တန်းကိုလည်းသူတို့သားကောင်များနှင့်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူသိသောစစ်မှန်သောမိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုနှင့်အတူ "စစ်မှန်သော profile များကို" ခုခံအနားမှာရှောက်သွား။ ၏သင်တန်းသင်တို့ရှိသမျှသည်သင်တို့ကိုဤကဲ့သို့သောတိုက်ခိုက်မှုအတွက်သို့မဟုတ်မယုံကြည်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်သင့်တယ်, ဒါပေမယ့်ငါထုကစားရန်အစိုးရများနှင့်မီဒီယာကိုကိုင်ထားသောအရင်းအမြစ်များနှင့်အခွင့်အလမ်းများကိုထွက်ညွှန်ပြစောင့်ရှောက်လော့။ သူတို့ကလုံးဝခြစ်ရာကနေ (သို့သော်တစ်ဦးယုံကြည်ကွန်ယက်ကိုနှင့်အတူ) ဆိုရှယ်မီဒီယာ profile များကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင်က "ကဲ့သို့မှတ်ချက်များနှင့်သင်၏ Facebook တွင် post ကိုအောက်မှာတုံ့ပြန်သူတွေကိုရှိမရှိသေချာနှင့်အတူမပြောနိုင်ပါဘူးသူတို့သည်ငါ၏အိမ်နီးချင်းများဖြစ်ကြသည်ကစစ်မှန်တဲ့င်"ဒါမှမဟုတ်"ငါ၏အသားရှိကျောင်းတစ်ကျောင်းအတွက်ကြောင့်ငါသည်ဤယောက်ျားသည်ကိုသိရ"(etc) တကယ်အစစ်အမှန်ဘဝကလူဖြစ်ကြ၏။ နှင့်လည်းငါတို့၏ကြီးမားသောကွန်ယက်ကိုရှိ Inoffizieller Mitarbeiter အရာရသောအခါလိုအပ်သောမျက်မြင်သက်သေများ-စည် drums ။
မီဒီယာထွက်ရှိသောအစိုးရဝါဒဖြန့်ရုပ်သံလိုင်းကဖြစ်နဲ့အဲဒီပုံရိပ်တွေကိုပြသကြပြီး (နှင့်ပါလိမ့်မယ်) လောကသင့်ရဲ့အမြင်ပေးပို့ဖို့ကိုပြစေခြင်းငှါနေကြသည်။ ကျနော်တို့ (အတူတူပင်မီဒီယာများက) ရှိလူမှုရေးမီဒီယာ, အားလုံးရုရှား trolls ဗိုလ်ခြေကြောင်းအတု profile များကိုအတူ Facebook နှင့် Twitter ပေါ်မှစိတ်ဓါတ်များကိုအကျိုးသက်ရောက်တည်ရှိပေမယ်ပိုနေမြဲကျားနေမြဲအခြေအနေကိုကြောင်းကိုထင်မြင်တယ် ကောင်းစွာပြီးပြီသင်တန်း၏ငြင်းဆိုသည်။ တကယ်တော့သင်တို့ရှိသမျှနည်းပညာဆိုင်ရာနည်းလမ်းများမြင်ကွင်းတစ်ခုသို့စာသားအရာအားလုံးကိုမှတည်ရှိကြောင်းပြောပါနှင့်ဧကန်အမှန်နှင့်အတူအကောင်းဆုံးအသေးစိတျမှမီဒီယာနှင့်လူမှုရေးမီဒီယာနှစ်ခုလုံးအားဖြင့်အမြင်များ၏ထိန်းချုပ်မှုနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦး PSYOP ရိုးရှင်းစွာညှိတစ်ဦးချင်းစီနှင့်အတူအလုပ်လုပ်သောကိုလည်းဖယ်ထုတ်ဘူး။ ဤသည်နှစ်ဦးစလုံးကျူးလွန်သူများနှင့်သားကောင်များ (နှင့်မျက်မြင်သက်သေများ) လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ သငျသညျသစ်တစ်ခုဝိသေသလက္ခဏာလိုလူတွေရှိသည်နှင့်ဝေးသောပွညျ၌အသက်ကိုပေးတော်မူသောကြောင့်, အတန်ငယ်လှည်းအဆိုပါ moneybag ရှိပါတယ်ဖြစ်ရမည်။ ထိုကဲ့သို့သောစစ်ဆင်ရေး၏အရေးပါမှုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုကြီးမားသည်နှင့်ဒါသင်သည်အဘယ်အရာကိုကုန်ကျစရိတ်ကြောင်းမျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာနောက်ဆုံးတော့သန်းပေါင်းများစွာကိုစဲစေခြင်းငှါရဲတပ်ဖွဲ့ပြည်နယ်အစီအမံများနောက်ကြောင်းပြန်မလှည်မိတ်ဆက်စကားထံသို့မရောက်ရ။
သို့သျောကြှနျုပျတို့ဝမျးနညျးပူဆှေးအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူသို့မဟုတ်ဆွေမျိုးသားချင်းများ၏ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်း, စိတ်လှုပ်ရှားမှုကျွန်တော်တစ်ဦး PSYOP ရှိကွောငျးအယူအဆဟာအမှိုက်အတွက်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တတ်တဲ့ပစ်ကျော်နှင့်မကြာမီကြာပါသည်။ ငါ၏အကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုသင်, ဒါပေမယ့်ကိုယ်ကနည်းပညာပိုင်းနှင့်ငွေရေးကြေးရေးအပင်မလမ်းကြောင်းများမှတစ်ဆင့်အတုသတင်းနှင့်အတူလူအစုအဝေးကစားရန်လမျး၌ဘာမျှမဖြစ်ရှိရှိကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည်င်ထင်ပါတယ်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, ကျနော်တို့အခွန်ရန်ပုံငွေမှလာကြ၏။
ဒါဟာအဲဒီမှာတစ်နိုင်ငံလုံးအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသပိတ်ကြီးအများအပြားပဲရိုးရှင်းစွာနေအိမ်တည်းခိုကြလိမ့်မည်ကြောင်းကိုဆက်ဆက်ထူးခြားတဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာအမှန်တကယ်အတော်လေးတစ်ထောင့် (အဘယ်ကြောင့်နှလုံးမူအလယ်ဗဟိုကိုရှေးခယျြမပေး?) သက်ဆိုင်ရာကြောင့်တိုက်ခိုက်မှု၏တည်နေရာကိုလည်းထူးခြားတဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုမှတပါး, မျှော်လင့်ထားတဲ့သပိတ်ပေါ်တစ်ဦးဖြစ်နိုင်သမျှတိုက်ခိုက်မှုများ၏သက်ရောက်မှုကိုသင်ပုံမှန်အလုပ်လုပ်နေ့နှင့်အလုပ်များတည်နေရာကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာအဖြစ်ဤမျှလောက်ကြီးစွာသောမဟုတ်ပါဘူး။ ထိုသက်သေကိုပုံပြင်တွေကိုသူတို့မြင်လွှာပေါ်တွင်ကြာကြာသမျှသောစိတ်အားထက်သန်နေကြသည်မဟုတ်ကြောင်းအကြံပြုထားတဲ့အလွန်မရေသော်လည်း, ဘာဆက်ဖြစ်လိမ့်နိုင်မည်နည်း သူတို့ကမိန်းမတယောက်ရှိမုသာစကားကိုမြင်သောအခါထိုလမ်းရထားကနေအမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုပစ်ခတ်ခဲ့? ထို့ကြောင့်Gökmen Tanis အဆိုပါလမ်းရထားကနေပြတင်းပေါက်မှတစ်ဆင့် running ထက် shoot? တဦးတည်းကိုနားထောငျ plop plop plop (တိတ်ဆိတ်) နှင့်အခြားသညျကွား Pang Pang Pang (အဘယ်သူမျှမထိတ်လန့်) ။ အဆိုပါလမ်းရထားကနေသေလွန်သောသူတို့သည်တစ်စုံတစ်ဦးကိုပစ်သတ်သငျသညျဒါ; ထို့နောက်အရေးပေါ်ဘရိတ် (သို့မဟုတ်လမ်းရထားမောင်းသူ braked), ဒါပေမယ့်ထိုမိနျးမတို့အနားပြီးသားဖြစ်ခဲ့သည် (သို့မဟုတ်နောက်ကွယ်မှ?) အဆိုပါလမ်းရထားဆွဲပြီးတော့လူတိုင်းကိုထွက်ဝင်ခြင်းနှင့်Gökmenနောက်တဖန်ရိုက်ကူးစတင်သည်? မည်သို့ကြောင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးထို့နောက်လမ်းရထားထဲကထွက်လာသနည်း အဘယ်ကြောင့်လမ်းရထားပြေးအပြင်ဘက် 24 အောက်တိုဘာလရင်ပြင်ပေါ်အဓိကထားမလဲ တံခါးနေဆဲတံခါးပိတ်စဉ်သူမကထွက်ခုန်ချရှိမရှိ? သို့မဟုတ် Tanis နောက်တဖန်ထွက်ရထို့နောက်လမ်းရထားထဲကသူမ၏ပစ်ခတ်ပြီးတော့ခြေလှမ်းများ (တံခါးအပိတ်ခံခဲ့ရခြင်းနှင့်လမ်းရထားမောင်းနှင်နေစဉ်) နှင့်ပါသလဲ? ထူးဆန်းတဲ့ (မဖြစ်နိုင်တဲ့မဟုတ်လျှင်) နှင့်မရေဇာတ်လမ်းတစ်ခုကိုသည်မဟုတ်လော
သကျသခေံဒံယလေသ Miller ကဒီဇာတ်လမ်းကိုအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်မီဒီယာအတွက်မဟုတ်ရင်အစဉ်အဆက်2သက်သေဖြစ်ကြ၏? (အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသပိတ်ပေါ်) ကိုလမ်းရထားကပိုခရီးသည်တစ်ခုခုမြင်ကြပြီဧကန်အမှန်ခဲ့သလဲ ဒံယလေသ Miller ကအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သက်သေဖြစ်တော်မူ၏။ သူ့ကိုမဆိုလေ့ကျင့်ရေး Utrecht တက္ကသိုလ်ကိုလေ့လာလျက်နှင့်မလို့ပဲ။ သူကမီဒီယာသစ်နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ယဉ်ကျေးမှုကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ သူကဘယ်လိုလိုအပ်သောသိရှိရမည် နက်ရှိုင်းသောအတု လုပ်ပေမယ့်ဖယ်နိုင်ပါတယ်။ Utrecht တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခများ၏ခိုင်ခံ့ဖြစ်ပါသည် ဒေါက်တာ။ Beatrice က de Graaf (သင်တန်း၏မြင့်မြတ်သောအမည်) ။ 2004 ခုနှစ်တွင်သူမက Inoffizieller Mitarbeiter ၏ခေတ်ကြောင့်အထူးသဖြင့်စိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်သော Utrecht တက္ကသိုလ်မှာ DDR အပေါ်တစ်ဦးပါရဂူဘွဲ့စာတမ်းရေးသားခဲ့သည်။ တကယ်တော့ဂျာမန်အရှေ့လျှို့ဝှက်ချက်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် dual-အခန်းကဏ္ဍမပြည့်စုံသောလူ။ ဒီနယ်သာလန်ဖြစ်ပျက်နှင့်ဤဖြစ်စဉ်လုံးဝကုန်ကြောင်းပါဘူးသောစိတ်ကူး, ဖြစ်ကောင်းကျနော်တို့ဖောထားသောအကြီးမားဆုံးထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ပါတယ်။
အခြားသက်သေကို Nicky ဗန် Grinsven အမည်ရှိကောင်လေးတစ်ယောက်သည်။ ဒီအသကျသခေံကို 'အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် Akbar' 'ဇာတ်လမ်းချည်ငင် may ။ သူက (ဒံယေလ Miller ကနဲ့မတူဘဲ) Gökmen Tanis လို့ပြောနားမထောင်ကြဘူး။ Tanis (မှာမိမိပုံပြင်သက်သေခံ Nicky 15 မီတာအပေါ်မကောင်းတဲ့သေနတ်သမားပါပြီရမယ် Nieuwsuur) လွဲချော်ခဲ့ကြစေရန်။ သငျသညျရိုက်ကူးဖို့ရှိသည်ဘူးဆိုရင်, ကောင်းစွာလုပ်, သင်ပြောပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် Akbar ပုံပြင် "ဟုအဆိုပါရှုပ်ထွေးမှုများဘို့ကောင်းတဲ့အစားအစာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်စေမအကြမ်းဖက်ဝါဒနှင့်တစ်တပ်ဟောင်းဂျီဟတ်ဝါဒီဖြစ်စေခြင်းငှါ,"။ ထိုဖြောင့်မတ်သောလယ်နိုင်ငံရေးတွင်တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိ (နှင့်သိုးတို့ကိုနှိုင်းယှဉ်လက်ဝဲ၏အပူအဘို့ကောင်းသောအစားအစာဖြစ်ပါတယ် မဲဆက်လက်သူကို အစဉ်အဆက်ကယ့်ကို) သူတို့ကိုဤအချိန်ကိုကိုယ်စားပြုမယ့်စေခြင်းငှါ, အဘယ်သူသည်ပါတီများ၏မှားယွင်းသောမျှော်လင့်ချက်။
ကျနော်တို့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှု, တဖန်ဤနေရာတွင်အတည်ပြုအကြမ်းဖက်ဝါဒအစီအမံများအတွက်လိုအပ်ကြောင်းသေချာနှင့်အတူပြောနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီမှာလည်း (မီဒီယာ scoial ဖို့မ; "ဆင်ဆာ" ကိုဖတ်) ထိုသို့သောရဲ site တစ်ခုမှအပ်လုဒ်တင်ဖုန်းကဓါတ်ပုံတွေအဖြစ်အသစ်သောကိရိယာများ, မိတ်ဆက်နေကြတယ်, ikbenveilig.nl ၏နိဒါန်းနှင့် Facebook မှာဘေးကင်းလုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုများ button ကို သင်သည်သင်၏မိတ်ဆွေများကိုသငျသညျ 1x ( "ကြီးမားတဲ့ data တွေကို" ကိုဖတ်) အသကျရှငျနေသိစေနိုင်ပါသည်။ ရဲပထမဦးဆုံးပြစ်မှုကျူးလွန်သူကိုရှာဖွေမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များကိုအသုံးပြုနှင့်အစိုးရပြုမူနိုင်ငံသားများခြိမ်းခြောက်မှုအဆင့်ကို5၏ခေါ်ဆိုမှုနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ပြီးနောက်အတွင်း၌ကျန်ရစ်ပုံကိုကောင်းစွာစမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်။ ခြိမ်းခြောက်မှု codes တွေကိုရာသီဥတုအစီရင်ခံစာများ (ကုဒ်အဝါရောင်, code ကိုအနီရောင်, etc) ကို အသုံးပြု. နှင့်ယခု "စစ်မှန်သောအကြမ်းဖက်" နဲ့မှမကြာသေးမီနှစ်များတွင်လူအပြီးသားနေသားတကျ။
ဤအတောအတွင်းအဆိုပါအငြင်းပွားမှုများ (မြင်အစ်ကိုGökmenတူရကီအနေနဲ့အစွန်းရောက်အစ္စလမ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ကလပ်ချိတ်ဆက်နိုင်သောကြောင့်, ကြောက်မက်ဘွယ်သောအများထင်ဖို့အကြောင်းပြချက်နေဆဲရှိကွောငျးကို dives ဒီမှာ) ။ ကြောက်မက်ဘွယ်သောအဆီသို့ဦးတည်တံခါးကိုဖွင့်ထားစောင့်ရှောက်ခြင်းအနေဖြင့်အကြောင်း, အဖြစ်မြင့်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုစောင့်ရှောက်ရန်သင်တန်းဖြစ်ပါတယ်။ Gökmenကြောင်း အဘယ်သူမျှမကြားဆက်ဆံရေး သားကောင်များကရှိသည်မယ်လို့ကြောင့်နောက်တဖန်တစ်ဦးကြောက်ရွံ့ option ကိုများအတွက်အပိုဆောင်းအငြင်းအခုံဖြစ်ပြီး (သို့သော်ထို့နောက်အဘယ်ကြောင့် 1 oriented လူတစ်ဦးတိုက်ခိုက်မှုများ?) ။ ထို့အပြင်အဲဒီမှာ (ဒီအချိန်မျှနိုင်ငံကူးလက်မှတ်) ဝေးရဖို့Gökmenကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပေသည်သော Renault Clio အတွက်မှတ်စုတစ်ခုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ စြေးထား Yahoo! သတင်းများ: တိုက်ခိုက်မှုမှတ်စုတစ်ခုကိုအသုံးပြုပြီးနောက်အနီရောင် Renault Clio ချုပ်တရားခံGökmenတီကညွှန်ပြမယ်လို့ရှာတွေ့ခဲ့သည်, ထိုတရားစွဲဆိုမှုကြေညာခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင် 'ဆိုတဲ့ဖြစ်ရပ်မှန်၏သဘောသဘာဝကြောင်းအတည်ပြုလိမ့်မယ်။ Gökmen Coke snorting အားဖြင့်သိသာကြီးနှင့်သိသိသာသာ notepad ကိုရောက်စေဖို့အလေးပေးဖို့မေ့လျော့ကြ၏။ ကျနော်တို့ကဒီမှာဖြစ်ပါသည်ယခုနောက်တဖန်ဖန်ဆင်းသောအရာကိုမြင်လိမ့်မည်။ ငါတို့သည်လည်း၏သင်တန်း Coke sniffer ကိုမိတ်ဆွေဖွဲ့Gökmenနှင့်အသံလွှင့်၏ဇာတ်လမ်းသိတယ်ပါပြီ ဒေါင်း & Jinek မနေ့ကမူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်တွေအများကြီးကိုအသုံးပြုသူတစ်ဦး capricious ခန့်မှန်းရခက်ယောက်ျား၏ပုံရိပ်ကိုပြသသည်။ အဆိုပါစနစ်များကိုအညီအမျှကောင်းတစ်နေ့ကစမ်းသပ်နှင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ပြည်နယ်များ၏အသုံးဝင်မှုနေဆဲသိသိသာသာခဏပွတ်နေသည်နေစဉ်ဒီတော့တပြင်လုံးကိုမီဒီယာအဓိကရုဏ်းသည်ကြောက်ဖြစ်စေမယ့် wellus nietus ဆွေးနွေးငြင်းခုံရှောင်။
source link ကို entries တွေကို: ad.nl, rtlnieuws.nl, ad.nl, uu.nl, npostart.nl, nos.nl, volkskrant.nl, bright.nl, geenstijl.nl, herhaling.nl
Gökmen Tanis ကျင်းပသံသယဖြစ်ဖွယ်ကျူးလွန်သူ, ဖြစ်ကောင်းမိသားစုဒရာမာ
Mason ဆိုဝဲလ်3အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်အသက်ရှင်နှင့်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့ပြောသော
mainstream သတင်းဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာအတုသတင်းဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာအဲဒါကိုအသိအမှတ်ပြုရန်မကဒါအသုံးများမှာ
Tags:: 24, တို့, ဒံယလေသ Miller က, doden, ဒရာမာ, echt, အထူးပြုလုပ်ထားသော, ဒဏ်ရာရ, Gökmen Tanis, Nicky ဗန် Grinsven, oktoberplein, ဆှေမြိုး, သားကောင်များ, ကြောက်မက်ဘွယ်သောအ, အကြမ်းဘက်ဝါဒ, Utrecht
19 မှမတ်လ 2019 13: 44
ကောင်းပြီသင်၏ထိပ်ပေါ်မှာဒါဖြစ်ကြသည်။ ကျွန် Remove ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့လက်ခံထားတဲ့အစွဲကနေ။ သော်လည်းခက်ခဲ။ ယခုပင်လျှင်ဤကိစ္စတွင်အတွက်သူရှေ့နေသိ? နိုင်ငံတော်နှင့်အတူကောငျးမှအဆက်အသွယ်ရှိသူတစ်ဦးကရှေ့နေ? ဘယ်ကိုမကြာခဏအတူတကွဆောင်ရွက်ရန်သိပ်သည်း get? ပြည်နယ်နှင့်အတူမိတ်ဆွေများကိုဖြစ်ဖို့ကချေ။
19 မှမတ်လ 2019 13: 52
ငါမီဒီယာ-hypnosis ကြောင့်ဖုန်းဆက်ဖို့ပိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်။ ပြည်သူ့ hypnosis အောက်တွင်ငြင်းခုံခြင်းနှင့်ရုပ်ပုံများကို (ဘယ်မှာကျော-and ထွက်လှုပ်ရှားမှုဟာအရေးပါတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်) နဲ့စာသားကသူတို့ကိုဆောင်တတ်၏သော hypnosis device ကိုအားဖြင့် hypnotized နေကြသည်။ ကြောက်မက်ဘွယ်သောအသို့မဟုတ် relational ပြဿနာများ etcetera ၏ပုံပြင်များနှင့်အတူ swinging ထို့ကြောင့်ကျော-and ထွက်။ အမျိုးသားသတင်းနှင့်သတင်းနှင့်ရာသီဥတုသည်လူ / အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏နောက်ကျောနှင့်ထွက်အတွက်ထို့ကြောင့်ယင်းလှည့်စက်ဝိုင်း။
အဆိုပါ hypnotist ကနွေးချိုမြိန်သရက်သီးကြောင်းသူတို့ကိုပြောထားသည်နေချိန်မှာသင်ကသူတို့တစ်တွေအချဉ်သံပုရာဖြစ်ကြောင်း hypnosis အောက်မှာလူတွေစားရန်ကိုဘယ်လိုပြောပြသလဲ? Rasti Rostelli အတွက်သိသာအားလုံးအလွန်ရယ်စရာဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ညီတူညီမျှအစစ်အမှန်ဘဝနှင့်ပရိုဂရမ်းမင်း, ဒါပေမယ့်အနည်းငယ်သိထားတဲ့အချိန်အတွက် hypnotized ။
19 မှမတ်လ 2019 14: 06
မှန်ပါသည်, ရှေ့ဆောင်ကျွမ်းကျင်သူ hypnosis မီလ်တန်နိုင်ကြောင်းအဲဒီမှာတလျှောက် churning ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါသတိလစ်ဖို့ဆွဲဆောင်အားဖြင့်သိ၏ကျော်လွှား။ ဤသည်နောက်ပိုင်းတွင် Tavistock အားဖြင့်မွမ်းမံခဲ့သည်နှင့်အသိသာဤသူတို့ရဲ့စိတ်ပညာရှင်တွေနဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်း, လူမှုရေးအရအင်ဂျင်နီယာ (ဉီးနှောကျလြျှောဖှတျခွငျး) အခြေအနေမှပုံမှန်အတိုင်းသံသယရှိသူအားဖြင့်လျှောက်ထားသည်တင့်ကားကွဲပြားခြားနားသောဝန်ကြီးဌာနများတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်စသည်တို့ကိုစဉ်းစား
19 မှမတ်လ 2019 14: 18
koffieapperaat လာသောအခါ (သင်ဟေးမသိရပါဘူး) အစားကြောက်မက်ဘွယ်သောအသို့မဟုတ်မိသားစုကိစ္စများ, ဤအထဲကဆွေးနွေး
အဆိုပါ Vimeo ရုပ်သံလိုင်းပိတ်ထားကြောင်းအဆိုပါတကယ်တော့တစ်ဦးအာဏာရှင်စနစ်လူးဝစ္စအတွက်အများဆုံးလွတ်လပ်သောက်ဘ်ဆိုက်နယ်သာလန်မှာသင်ပေးတယ်။
Vimeo မှာကတခြားဆိုဒ်များနှင့်ကြောက်မက်ဖွယ်ပုံရိပ်ကိုပစ္စည်းများအနေဖြင့်အဆိုပါ bloodiest ဗီဒီယိုများနှင့်ပင်လိုင်းများကိုဆက်လက်ရသော, အ funzige porn ဆိုဒ်များဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါ။ ရဲ့ပါစေ
သင့်ရဲ့ဦးနှောက်စောင့်ရှောက်သောထိုကဲ့သို့သောညစ်ပတ်ရုပ်ရှင်နှင့်အတူအားလုံးလိုင်းများနေမကောင်းရပါဘူးအင်တာနက်ပေါ်ရှိရှိနေဆဲအားလုံးသော။ ကလေးများတစ်ခါတစ်ရံတွင်အကျည်းတန် ...
သူကသူ့ကိုယ်သူယခင်ဆောင်းပါးထဲမှာထောက်ပြအဖြစ်သခင်ဘုရား Vrijland ၏ Vimeo ရုပ်သံလိုင်း, သတိပေးခြင်းမရှိဘဲအင်တာနက်ကိုတပတ်မှဖယ်ရှားပစ်ခဲ့တာ။
(အစားအတုကနိုင်ငံရေးပြဇာတ်ရုံအုပျစုမြား၏) တစ်ချိန်ကနှင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖြစ် Re-ရွေးချယ်တင်မြှောက်မယ်လို့သူကမီဒီယာကလူအားလုံးပုပ်ပန်းသီးအထဲကမီဒီယာမြေကနေအသံတွေကိုကျနော်တို့အပေါ်လာနေသောကြောင့်, ပါဝါကျော်ရွေးကောက်ပွဲများကျင်းပရန်ပင်ရှိစေနိုင်ငံရေးမှာ (ပြဇာတ်ရုံအုပ်စုများသိလား အဆိုပါ Jinek ဒေါင်းအလံနှင့် New အသင်းတော်များရှိုးရပ်တန့်ဖို့) ပေမီဒီယာကိုဦးနှောက်ကို flood ။
သူတို့ TV နဲ့အင်တာနက်ပေါ်မှာပြနိုင် bloodiest ရုပ်ရှင်တွေ
သို့သော်လည်းသခင်ဘုရား Vrijland သည်သူ၏ Vimeo ရုပ်သံလိုင်းတစ်ခုကဒီမိုကရေစီတိုင်းပြည်ထိုက်တန်တစ်ဦးအစမ်းသုံး, အသိပေးစာမပါဘဲဖျက်သိမ်းပြောင်းရွှေ့ကြေးပေါင်သန်းဖြစ်ပါသည်, သင်ပြောချင်
19 မှမတ်လ 2019 15: 26
Utrecht အတွက်လိမ္မာပါးနပ်စစ်ဆင်ရေး၏ဤမြင့်မားလမ်းကြောင်း welgedelijk နယူးဇီလန်အတွက်စစ်ဆင်ရေးနှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မအထူးသဖြင့် 2023 အထိဦးဆောင်အနောက်ဘက်တွင်အလားတူစစ်ဆင်ရေးများနှင့်အရေးအခင်း, လာမယ့်နှစ်တွေမှာမျှော်လင့်ထား။ မီဒီယာလူဦးရေအကြားတွင်ကြီးထွားလာသောဆန့်ကျင်တာကစိတ်ဓါတ်များပေးပါလိမ့်မယ်။
19 မှမတ်လ 2019 15: 33
ထိုအကဲဒါဆိုရင်တော့! အဘယ်မှာရှိဒီရုပ်သေးအပြင်ဘက်သို့သွားဘူး!? မထီမဲ့မြင်ပြုသောဖို့ဘာဖြစ်ခဲ့သည် .. https://nos.nl/artikel/2164422-erdogan-waarschuwt-europeanen-jullie-zullen-niet-veilig-zijn.html
19 မှမတ်လ 2019 19: 31
@Iberi, Idd Mason ဆိုအာဒိုဂန်ရဲ့နောက်တဖန်အစုလိုက်အပြုံလိုက် play ဝမ်းသာပါတယ်။ ပိုက်ရဲ့စစ်ပွဲနှင့်လာကြလိမ့်မည်ရမယ် ...
19 မှမတ်လ 2019 19: 40
အဆိုပါ Freemasons အကြား 1-2tjes ပထမဦးဆုံးအကြိမ်မဟုတ်ပါဘူး ... Rutte ရွေးကောက်ပွဲကာလအတွင်းတစ်ဦးကူညီပေးနေလက်ဒါညီအစ်ကိုတွေကသူတို့ကိုယ်သူတို့မလည်ရန် Erdo ပေး၏လိုက်တဲ့အခါ
19 မှမတ်လ 2019 17: 47
18 မတ်လ, အထူးတစ်ရက်လျှင်ငါနေဆဲအံ့ဩ?
မတ်လထဲမှာလွန်ခဲ့တဲ့322 နှစ် Zaventem အပေါ်တိုက်ခိုက်မှုရှိခဲ့သည်။ ငါနေ့စွဲကိုရှာခြင်းငှါအလိုရှိသောအခါ, ငါတိုက်ခိုက်မှုနှင့် ပတ်သက်. အောက်ပါဝိုးတဝါးပုံပြင်တွေ့ရှိခဲ့:
19 မှမတ်လ 2019 19: 37
ဘန်ဝစ် Bertelsmann AG က, Tanis အဘယ်သူမျှမဝီလီကိုဖွင့်ဖို့သစ္စာကျိန်ဆိုသူ AIVD ကိုယ်စားသရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်🙂
19 မှမတ်လ 2019 20: 13
ကမ္ဘာ့ဖလား 3e အထိဦးဆောင်နှင့်အတူကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှဖြစ်ပျက်ဘာကပြောပါတယ်, သူအစ္စတန်ဘူလ် (Constantinople) ဤနေရာတွင်ဗဟိုအခန်းကဏ္ဍလိမ့်မည်ဟုအခိုင်အမာသူကိုအရေးပါတဲ့မွတ်စ်လင်ပညာရှင်။ သူတို့ကလာမယ့်သောကြာနေ့အမေရိကန်အနောက်ကမ်းခြေပေါ်တွင် 22e, မျှော်စင်တံတားတစ်လျှောက်တွင်ဖွင့်ပါလိမ့်မယ်စောင့်ဆိုင်းဘယ်မှာ dus..eens Divide နှင့်အောင်နိုင်? အဘယ်သူသည်သိတယ် ..
19 မှမတ်လ 2019 20: 23
ဒါကြောင့် Eh Trollongren ကောင်းပါတယ်, သင်သည်ဤအရာရှိ rabble များအတွက်အကောင်းဆုံးပေးသောမမြင်မိပါဘူး .. ?
"နိုဝင်ဘာလအတွက် CTIVD ကိုလည်းမြင်ဆွေးနွေးရန်နိုင်ငံတွေအနှံ့ဖြန့်ဝေလျှို့ဝှက်သတင်းအချက်အလက်ကိုဖော်ပြမှလွှတ်တော်သို့တောင်းဆိုချက်တစ်ခုစေလွှတ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါလျှို့ဝှက်လျှော့ချခြင်းအားဖြင့်, ငါးလမ်းရှိခရိုင်လျှို့ဝှက်ချက်န်ဆောင်မှုများဟာသူတို့ရဲ့ကြီးကြပ်မှုတင်းကျပ်ရန်။ "
20 မှမတ်လ 2019 10: 30
ငါ '' အားပြိုင်မှု '' ရန်နှင့်ဝန်ကြီးများမှမိမိတို့လျှာ၏နောက်ကျောကိုပြလုံခြုံရေးနှင့်တူရယ်ရှိထားဖို့လိုပါမယ်။ အဲဒါကို 'ကြီးကြပ်ရေးမှူး' 'ကပြီးတော့ရာဇဝတ်မှုများ၏အသိပညာရှိသည်နှင့်ပင် "ကြီးကြပ်ရေးမှူး" ကိုထိန်းချုပ်ထားအဘယ်သူသည်စသည်တို့ကိုရာဇဝတ်မှုများအတွက်ကြံပါလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်ကောင်းအရာရာကိုသိရန်မလိုချင်သလဲ? Charade ။
19 မှမတ်လ 2019 21: 30
21 မှမတ်လ 2019 11: 27
သငျသညျဤပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိမိအလက်ချောင်းများ၏အချိုးအစားနှင့်အညီကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်မြင်ပြီလော လိင် overalllll များမှာ
19 မှမတ်လ 2019 21: 31
bit တစ်ဦးချင်းစီကိုအရောင်မုတ်ဆိတ် (ပုံလြှို့ဝှကျစကား)
20 မှမတ်လ 2019 08: 23
အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပေမယ် edoch ပထမဦးဆုံးစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ကို 'တစ်ခုတည်းကျည်ဆံ' 'version ကိုစောင့်ဆိုင်းပါစေ ... 😉
20 မှမတ်လ 2019 11: 51
"ထွက်ပြေးဖို့" ဟုဘေးဥပဒ်ကိုခရီးသွားဧည့်ပဲ! ပြစ်မှုကျူးလွန်သူလေယာဉ်ခရီးစဉ်နှင့်အနောက်တိုင်း 'ညီ "ကိုစာတစ်စောင်ရေးလိုက်ရေးသားခဲ့သည်? ထို့နောက်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတစ်ဦး "မိတျဆှေ" မှဖုန်းဖြင့်တစ်ဦးဥပဒေကြမ်း paid?
21 မှမတ်လ 2019 08: 46
ဘာမှမဖြစ်ပျက်ပါလျှင်တစ်ခါတစ်ရံသင်သိကြပါဘူး။ Truman ရိပ်သာလမ်း RAID ။ အမေရိကန်သမ္မတသို့မဟုတ် Truman Show ကို? ခအတွက်တိုက်ခိုက်ဗလီ။ ဗလီနဲ့ခရစ်တော်ဘုရားကျောင်း?
22 မှမတ်လ 2019 17: 21
မန်ချက်စတာ Arena တွင်:
22 မှမတ်လ 2019 20: 38
အလွန်များစွာသောကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းသည် hoaxes နေဆဲရေကဗျာဆရာဒီလိုမျိုးရှိတင်ဆက်ပေမယ့်
18, 35 ကရှင်းလင်းမဖွစျနိုငျမိနစ်, အသိတွေအများကြီးနှင့်မီဒီယာ / ပါဝါလက်ထက်ကြောက်လန့်ကိုပိုင်းခြားသုံးသပ်ပြီး
23 မှမတ်လ 2019 13: 04
အဖြစ်အများအပြားသေဆုံးမှုစေရန်ရည်ရွယ်သောသူအကြမ်းဖက်သမားများကိုမကြာခဏဖော်ပြခဲ့တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဗုံးခွဲသူ hit ဒါမှမဟုတ်သင်ကမမျှော်လင့်တဲ့တစ်ဆိတ်ငြိမ်ရာအရပ်ကို။ သော်လည်းသပိတ်မှောက်သူတို့ကဂေးမာန, သတိရအောက်မေ့နေ့သို့မဟုတ် King ရဲ့သာဓကမှာဒဏ်ခတ်ကြဘူးဆိုတာပါပဲ။ တကယ့်အကြမ်းဖက်သမားအဖြစ်သင်အလယ်တန်းလူအစုအဝေး၌သင်တို့၏လုပ်ရပ်များလုပ်ပေးလိမ့်မယ်။ Duty ၏ခေါ်ဆိုမှုများကဲ့သို့ပင်နယူးဇီလန် psyop တူသောကောက်ယူလိုက်ပါ။ သငျသညျကဲ့သို့သောလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ဆန့်ကျင်ဒါများမှာလျှင်မည်သည့်နျူကလီးယားစက်ရုံဖွင့်ကောက်အဘယ်ကြောင့်ဘာလဲ လုံခြုံရေးအမှတဆင့်ထိုး, ဓားစာခံကွဲပြားခြားနားကွင်းဆက်တုံ့ပြန်မှုသို့မဟုတ်ဆီးအိမ်ဓာတ်ပေါင်းဖိုကိုအစပျိုးလိုက်ခြင်းအရာတခုန်ထမ်း။ သူတို့ဟာ Nuon တူသော pylons နှင့်အပင်၏ခြေရင်းမှာလည်းသို့ရာတွင်တတ်နိုင်သမျှထက်ပိုက်လိုင်းများဟန်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်အားလုံးမှာတခါမဟုတ်တွေ့ကြုံတတ်၏။ ထိုကဲ့သို့သောအားလပ်ရက် non-ညွှန်ကြားပရမ်းပတာသို့လှည့်နိုင်စဉ်အတွင်းသူတို့မဟုတ်ရင်စီစဉ်ထားထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်ချောချောမွေ့မွေ့ထွက်ပြေးထိန်းသိမ်းထားရမည်ဖြစ်သည်။
24 မှမတ်လ 2019 16: 01
ကံမကောင်းစွာသာလျှင်တစ်ဦး obelisk မှာအထူးသဖြင့် familie..rituelen အဘို့သိုထားကြောင်း
24 မှမတ်လ 2019 11: 31
အဘယျသို့အကြှနျုပျကိုရိုက်ဘားနည်းနည်းသားကောင်များနှင့် ပတ်သက်. လူသိများကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပင်သတင်းစာများခဲရေးလိုက်နေကြသည်။ စံပြမကြာသေးမီကကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးနေ့တိုင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးသားခဲ့ဘယ်မှာရှိဤ "သားကောင်" အကြောင်းကိုစာဖြင့်ရေးသားဘာမှမရှိဘူးဖြစ်ပါတယ်။ 1 19 ကတဦးတည်းနှစ်အရွယ်နှင်းဆီ Verschuur ဖြစ်ပါတယ် .. သို့သော်လည်းငါသည်နာမကို Google သောအခါငါသူမ၏အကြောင်းကိုနီးပါးမျှသတင်းအချက်အလက်ကိုရှာပါ။ သင်ဆဲမွေးဖွားကြီးပြင်းခဲ့သူတစ်ဦး 19 နှစ်အရွယ်လူမှုမီဒီယာအပေါ်တစ်ဦးနည်းပညာဆိုင်ရာအသက်အရွယ်အတွက်လည်ပတ်မျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမ Facebook အကောင့်ကိုအဘယ်သူမျှမ instagram အကောင့်မရှိဒင်္ချက်တင်အကောင့်။ သငျသညျ Google တွင်ကြုံတွေ့ရကြောင်းအချို့ကဓာတ်ပုံများသည့်သတင်းစာများကိုအသုံးပြုပြီဓါတ်ပုံများဖြစ်ကြသည်။
ရှိသမျှတို့ကိုငါမှားယွင်းနေသည်ကြည့်ရှုလျှင်။ သို့သော်ဤအရာအားလုံးနှစ်ဖက်အပေါ် stinks ။
24 မှမတ်လ 2019 11: 42
Nope ကောင်းသောရှာဖွေနေ။ ဒါပေမယ့် (အားလုံးတံခါးဝ waren..de ပုံရိပ်တွေကိုအလွယ်တကူပွား software ကိုပုံကြီးချဲ့ worden..wie ကစစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်ကြိတ်ကြိတ်တိုးနိုင်ပါတယ်ပိတ်သိမ်း) ကလူတွေပန်းပွင့်ကိုတင်သောလူများ၏အဖြစ်အပျက်များပုံရိပ်များအားဖြင့် hypnotized ကြောင့်အရေးနှင့်အသံတိတ်ပါဘူး
ဒါဟာမည်သူမဆိုကျွမ်းကျင်ထားပြီးနာရီအနည်းငယ်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးလေ့ကျင့်နိုင်သောဥယျာဉ်ကို-and မီးဖိုချောင်ဆော့ဖျဝဲကြောင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ ယောဟနျသက de Mol (ရိုက်တာ) သိသာသည်သူ၏စွန့်ပစ်ခြင်းမှာပိုကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုခုပစ္စည်းပစ္စယရှိပါတယ်:
24 မှမတ်လ 2019 15: 59
24 မှမတ်လ 2019 21: 46
သငျသညျရေးဖို့အရာဖြစ်တယ်။ ဒါဟာသာမန် Dutchman ၏လွတ်လပ်သောဝေဖန်စဉ်းစားတွေးခေါ်ပေးထားဝမ်းနည်းဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။ အဘယ်အရာကိုတိုင်းပြည်။ သူတို့ဘာဖျော်ဖြေနေကြသည်။
27 မှမတ်လ 2019 19: 06
တစ်နေရာရာ, အေဒီယုံကြည်ရပျ နေ. , ကသားကောင်များအတွက် "လေးစားမှုထဲက" ဖြစ်ခဲ့သည်။
26 မှမတ်လ 2019 11: 58
Oow ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကသူသည်မသိစေခြင်းငှါ, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကိုသူတို့တကယ်မတည်ရှိခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးမဟုတ်နိုင်သလဲ
27 မှမတ်လ 2019 07: 58
သူမ၏အမည်အား Melanie (အေဒီ) ဖြစ်ပါသည်, သူတို့နေဆဲလည်းဖော်ပြသလဲ? ထိုသို့ဖြစ်လျှင်အဘယ်သို့ပါမယ်သို့ရာတွင်အချို့ရှင်းရှင်းဖျက်ဆီးခြင်းငှါအပြီးတည်ရှိနေထွက်လှည့်သောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအကြောင်းရေးလုပ်ပါ။ အဆိုပါဖောင်ဒေးရှင်းကမစ္စစ်မာသ (ကျနော်အခြေခံအုတ်မြစ်ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူး, သူမ၏ကိုယ်ပိုင်ဖခင်ရည်ညွှန်းသော) မက်ဆေ့ခ်ျများအမျိုးမျိုးတို့ကိုဖယ်ရှား ... အခြားအမျိုးသမီးတစ်ဦးလည်းရှိနေမယ်လို့သူတစ်ဦးအစ်မများနှင့်မိခင်နှင်းဆီရှိခဲ့ပါတယ်။ အိမ်နီးချင်းအရာအားလုံးကိုစောင့်ရှောက်ကြာ '' တူသောအရသာရှိတဲ့မိသားစု, သူတို့ကိုရှိပါတယ်။ " Dirk Kleppe (ယာဉ်မောင်း) နှင့်အသုဘနည်းပြ Rene Werner ဘဏ္ဍာရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်အတိတ်ရှိတယ် .. အဘခမည်းတော် Rene Verschuur FB ပေမယ့်သူတို့ကိုယ်သူတို့အဘယ်သူမျှမကအခြား Verschuur ရှိသည်သောသာ 1 သည်အခြား Verschuur, တဦးတည်းအဒေါ် Lenie ရှိပါတယ်။ 2014 ၏သမီးနှင့်အတူပြီးခဲ့သည့်ရုပ်ပုံဖခင် ....
27 မှမတ်လ 2019 22: 51
26 မှမတ်လ 2019 15: 08
ကောင်းပြီ, အဘယ်ကြောင့်ကို 'privacy ကို' ၌လွန်တရားပေတည်း။ အများပြည်သူကာကွယ်ပေးရန်ဒါပေမယ့်ထွက်လာသောအစိုးရဤမျှလောက်သောအစိုးရကိုက်ညီသောယေဘုယျလူဦးရေကနေလျှို့ဝှက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။ မဟုတ်
ငါသားကောင်ကိုမြင်ရ, ဒါကြောင့်ငါကဒီမှာသူမ၏ခေါ်ယခုအခါပုံမှန်အတိုင်းသံသယရှိသူရှေ့နေခေါ်သွားတယ်။ အဘယ်အရာကို script ကိုဆက်လက်နိုင်အောင်သူတို့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကိုရှာပါ။
« Gökmen Tanis ကျင်းပသံသယဖြစ်ဖွယ်ကျူးလွန်သူ, ဖြစ်ကောင်းမိသားစုဒရာမာ
ဒီမိုကရေစီိံ Thierry Baudet ဖိုရမ် (FVD) "Minerva ၏ဇီးကွက်က၎င်း၏အတောင်ပံပြန့်နှံ့" »